Usizi lomndeni wabawu-37 ompintshana emxhasweni - Ilanga News
Home Izindaba Usizi lomndeni wabawu-37 ompintshana emxhasweni
Abazukulu baphoqeleka ukulala emagaraji edolobheni uma imishanelo ingathengwanga
UNKK Jobe ofake ijezi eli-green, uthathwe ehleli nabantwana bakhe kanye nabazukulu. Kulo mndeni kuphilwa kanzima njengoba engekho osebenzayo,
bathembela emalini yesibonelelo sezingane nangokudayisa imishanelo. izithombe ngu: sandile makhoba
UBESHAYWA wuvalo lokuthi kungenzeka ahlaselwe ngama-phoyisa noma ngoso-nhlalakahle uNkk Getty Jobe, uMa-Ndlanzi (59), okusabalale i-video yabazukulu bakhe ezinkundleni zokuxhumana belibeka ngesihloko elokuthi ngeke bakwazi ukubuyela kubo eHluhluwe uma bengaphe-the ngisho imali yempuphu nxa bengathengisanga imishanelo yelala abayidayisa eRichards Bay.
Kule video uFanele Jobe (15) uphendula obuzayo ukuthi kabagoduki ngani ngoba sekuyahlwa, athi: “Ekhaya sibanjwe yindlala, kasikwazi ukugoduka singaliphe-the nephepha lempuphu. Uma si-ngayidayisanga le mishanelo sizolala khona lapha.”
UFanele usho la mazwi ethatha imali eyifaka ephaketheni njengoba lona obebaqopha ebethenga.
Baveze ukuthi uma ingadayisa-nga kahle imishanelo, kabagoduki, balala emagaraji kuse, baqhubeke nokudayisa ngakusasa ngoba kubo kulindeleke ukuba babuye kukhona abakuphethe esandleni okuya ngasethunjini.
ILANGA lihambele lo mndeni wakwaJobe ohlala esigodini saseMduku, eHluhluwe, lathola ukuthi laba bazukulu ababili bayi-ngxenye yabawu-17 bakaNkk Jobe. Bazalwa yizingane eziwu-7 zika-Nkk Jobe, akekho osebenzayo.
Izinkwa kazilungi kulo mndeni
Kulo mndeni uthi uqhamuka nje ubone indlu yomxhaso enamagu-mbi amathathu abahlala kuyona bonke, bese kuba nencanyana eceleni okulala kuyona abafana abadala.
Uma ungena ngaphakathi
endlini, ngisho ikhishi lakhona linezingubo zokulala njengoba uNkk Jobe ethi uma sekulalwa, kusala indawo yokuhamba nje labo abasuke bephuma beyochama phandle ngoba phansi kusuke kwendlale izingane, zilele.
Ngaphandle kugcwele izinduku namasundu omisiwe okwakhiwa ngakho imishanelo, kuthi njalo ngezimpelasonto abazukulu ba-phume baye ezindaweni ezahlukene bayodayisa, ngeSonto babuyele kuleli khaya nabakutholile, bephethe nalokho abasuke beya-lelwe ukuba bakuthenge, bavuke baye esikoleni ngoMsombuluko.
Yize beziphilisa ngokwakha imishanelo kodwa kuyabonakala ukuthi kakwaneli ngoba kuba nesikhathi lapho ingathengwa khona, ekubeni kulo muzi ngosuku kuthiwa kuphekwa amabhodwe amathathu, elesine kube ngelesishebo.
“Kuyadliwa ukudla lapha ekhaya futhi kuyaphekwa njalo ngoba ngeke zilunge izinkwa. Uma kuphekwa uphuthu luba ngama-bhodwe amathathu bese elesine kuba ngelesishebo.
“Uma kungekho okudayisiwe, siphila ngemali yesibonelelo sezi-ngane nayo engeneli ngoba sibani-ngi kakhulu,” kusho uNkk Jobe.
Kukhona okhulelwe umzukulu ka-18 walo mndeni
Uma ekhuluma kuyavela ukuthi kuleli khaya kuphekwa kanye ngosuku, bese kudla wonke umuntu okhona. Indodakazi yakhe uNkz Nombuzo Jobe (37), inabantwana abawu-5, ivele ikhophozele uma ibuzwa ukuthi izalelani kangaka isimo isibona singesihle kubo.
“Ingane yami encane isizohla-nganisa iminyaka emibili, sengi-gcinile nje ngayo,” kusho yena.
Khona egcekeni, omunye wamadodakazi kaNkz Jobe obelokhu ekhophozela, engafuni nokubuka amakhamera, ukhulelwe umzukulu okuzokuba ngoka-18 kulo muzi.
NgoLwesine lo mndeni ulale isimo sawo sesinokushintsha ngemuva kokungenelela kosomabhi-zinisi abahlukene abebeholwa nguMntwana Bonga Zulu wasesigodlweni oQathaqatheni benoNkk Zanele LaMbokazi Nkambule, abahambisele lo mndeni ukudla,
beyobheka nesimo ophila ngaphansi kwaso.
Sekungenelele osomabhizinisi ukutakula isimo
“Njengomama ingithintile indaba yabantwana ngesikhathi uMntwana uBonga engitshela ngabo. Besazi ukuthi babili, bahlala nogogo, uma sifika kugcwele umuzi, abantu bawu-37.
“Sizimisele ngokuqhamuka nesixazululo esizoshintsha isimo salo mndeni. Kumele kube
nendlela yokuthi baphile, balale bedlile nsuku zonke,” kusho uNkk Nkambule.
UMntwana uBonga unxuse nabanye osomabhizinisi abanga-kwazi ukufaka isandla ukuba ba-sukume kubanjiswane.
“Isifiso sethu wukuthi kubekhona abantu abasebenzayo kuleli khaya ngoba lokho kuyosishintsha isimo.
“Sifisa nabantwana babe
nendlela yokugxila ezifundweni zabo, bangakhathazwa wukuthi kumele bazame imali yempuphu.
“Kayikho ingane ekhulayo okumele ithwale lelo joka. Ngakho-ke kumele kutholakale isixazululo ngokushesha,” kusho uMntwana uBonga.
Ubenovalo lokuboshelwa ‘ukudayisa ngabazukulu’ umama wekhaya
UNkk Jobe uthi ngesikhathi ebona kungena izimoto zilandelana emzini wakhe, ubezitshela ukuthi uzoboshwa ngokuthi udedela abazu-kulu bayodayisa, balale esigange-ni.
“Ngaqala ngihamba nabo, bagcina sebejwayele.
“Empeleni kwamina kangilali uma bephumile, ngifona njalo ngibuza impilo.
“Ngiyakuqonda ukuthi yisimo esibucayi lesi kodwa-ke bekunge-kho ebengingakwenza njengoba kumele sizame konke esingakuzama ukuze silale sidlile.
“Abantu abawu-37 baningi kakhulu kanti nokudla kumba eqolo,” kusho uNkk Jobe. Indodana yakhe uMnu Dumisani Jobe (39) nayo engasebenzi, ibonge labo somabhizinisi ngokulethela abashana bakhe ukudla.
“Siyabonga kakhulu ngenikwe-nzele abashana ukuthi nibalethele ukudla. Siyabonga siwumndeni wakwaJobe, enisenzele khona nikwenze nakwabanye,” kusho uMnu Jobe.
Previous articleUmbhishobhi wamasheshi nethemba kubazalwane
Next articleSishone ‘sijabule’ isilomo se-Trompies